Aniguba waan liibaanee, yaan ladneyn dalkan: Cali Maxamed Warancadde Wasiirka Wasaaradda Arimaha Gudaha . - Haldoor News | Haldoor News
Aniguba waan liibaanee, yaan ladneyn dalkan: Cali Maxamed Warancadde Wasiirka Wasaaradda Arimaha Gudaha .
Samadii daruur laguma arag Seerma weydadae
So’dii ceelka waa waxa biyuhu uga sal guureene
Adduunyadu sidaa kuma gudhoo subaxba waa cayne
Maantana Siciidow waqtigu saamaxaad malehe
Moorada salkeediyo xalaan sugay malluugtiiye
Sufurtaa madow ee dayaxa saaran baan garanne
Dhiig buu sidaa waqalkan aad sagalka mooddaaye
Siigada dhacaysaa ragbay sabibi doontaaye
Ilaahay sidaan ka arki jirey way ku socotaaye
Duulkii sedkoodii dhammaa saancadka lahaaye
Sanbabada gantaalaha ka mudi sahdanbay garane
Waa nayla kala soocayaa subax aan dheerayne
Ninki cadho la sooyaamayow sabirka maad dhowrtid
Abwaan Axmed Ismaaciil Diiriye “Qaasim”-IHUN-
“Dalku maanta maalin uu ka wanaagsan yahay oo ina soo martey ma jirto” ayuu yidhi Cali Warancade ..
Dhacdo kasta oo aduunka ka dhacda waxbaa laga bartaa, sidoo kale ayaa laga reebaa warbixin gasha taariikhda. Shalay Cali Warancade wuxuu ka tirsanaa xisbigii UDUB ee uu kaalinta ku lahaa burburkiisa, wuxuu taageero laxaad leh u fidin jiray madaxweyne Daahir Riyaalle, waxaanu aflagaado iyo dhaleecaynba aanu ka gaabsan u jeedin jiray Madaxweynaha iminka Axmed Maxamed Siilaanyo oo markaa ahaa gudoomiyaha xisbiga Kulmiye. Waxaa ayaandaro laga yaqyaqsoodo ah afkuu shalay ku aflagaadeeyey Axmed Maxamed Siilaanyo ayuu maantana aad ugu amaanaaa. Bulshadu mar kasta oo uu hadlo waxay iswaydiisaa marna intuu kaligii fadhiistay ma dhageystay hadaladiisa hore iyo kuwa iminkaba.
Dadka hab-dhaqanka noocan oo kale lihi way jiraan,waxaase kaalmeeya bulshada ay ku dhex nool yihiin.Waa hab-dhaqan la dagaalankiisa aaney wali u bislaanin bulshooyinka aduunka siiba kuwa qaarada Afrika. Waxaa qaarada Afrika laga doortaa kuwa loo arko inay waxyeeladoodu yaraaneyso markay maamulka qabtaan, iyadoo sooyaalkoogu aanu sugayn inay wanaag sameeyayaal yihiin.
Bishan Oogoto markay aheyd 10, 2105 ayaa wasaarada arimaha gudaha ee uu madaxda ka yahay Cali Warancade warqad u dirtay mujaahid Axmed jabaan amreysa inuu joojiyo dhismaha gurigiisa. Arintaasi umay cuntamin Axmed Jabaan oo halkaa la deganaa caruurtiisa ilaa 1994 sida la sheegay. Wasaarada arimaha guduhuna may cadeynin sabab uu guriga ku joojiyo oo aan aheyn adeegsiga awoodda dawlada ee laxaad sheegada ah. Axmed Jabaan waa mujaahid dulmiga iyo awooda dawlada oo si khaldan loo adeegsado hore uga diiday Afweyne Barre, Sidaa darted ayey warqadani xasuusisay dareen hore oo u ka baqay awooda dawladeed. Si kastaba arintu ha ahaatee Axmed Jabaan arintaasi lamay haboonaan, maanka wanaagsanina wuu diidayaa. Dalku wuxuu leeyahay sharci, haddii la leeyahay meesha ma lihid waa in dacwad lagu soo oogaa oo maxkamada la geeyaa, sidaasi ilaa iminka inay dhacdey lama hayo.
Arintu markay halkaa mareysa ayaa sidii Afweyne u lahaa ciidamadii Dhabarjabinta iyo Hangashta, Dawlada Siilaanyan u leedahay ciidamada RRU. Sidaa darteed ayuu Cali Warancade oo aqoon u lahaa sidii loo adeegsan jiray lahaa ciidamadii Dhabarjabinta iyo Hangashta, adeegsadey ciidamda RRU una diray inay isagana soo xidhana , reerka awood ku muquuniyaan. Taasi waxay keentay in wiil 11 jir oo uu dhalay Axmed Jabaan oo xabsidga ku jiraa uu ku dhinto adeegsiga ciidamda RRU, afar caruurtiisa ka mid ahina ay ku dhaawacmaan, lana aflagaadeeyo xaaska Axmad Jabaan. Muuqaalkaa markaad aragto waxaad dib u jaleecaysaa wixii laga dagaalamey.Waxaana kuu soo baxaya in dalku horumar dhismaha wadooyinka iyo guryaha gaadhey, hase yeeshee uu dib u dhac weyni ka jiro daryeelka dadka cadaalad ahaan iyo kaalmeyn ahaanba,
Hase yeeshee Cali Warancadde oo salaanka siyaasadeed ee la jaanqaadey iyo kurisga lagu boqray eegaya ayaa yidhi: “Dalku maanta maalin uu ka wanaagsan yahay oo ina soo martey ma jirto”. Markay weedhahaasi dhagahaaga ku soo dhacaan, waxaad xasuusnayesaa maansada Qaasim(IHUN) eek or ku xusan oo ididiilo iyo tilmaan inoo ah. Sidoo kale waxaa maankaaga ka soo maaxneysa maansada
Kaare dalun dulceeyiyo
Subax mooro duugtoo
Guryahoodi dumi soo
Rabta iney diboodaan
Daraawiish ku saartoo
Ku dabaasha haawey
Oor yaheeda dooxdoo
Dabar goysa waayeel
Wali Dunida Kama Dhicin, Abwaan Axmed Aw Geedi
Waxaan maqaalkeyga ku soo gabagabeynayaa warbixin uu inoo diyaariyey mujaahid Boobe Yuusuf Ducaale. Warbixintani wuxuu mujaahid Boobe inagu dareensinayaa dadaalkii iyo halgankii uu mujaahid Axmed Jabaan u soo galey dalkan iyo dadkan si aaney u dhicin in awood dawladeed loo adeegsado qaadashada xaqooga, xabsiyada lagu abuuxiyo, caruurtooda qoryaha cashuurta lagu bixiyey lagu dilo, ooryahooda la aflagaadeeyo, iwm.
Waxaanu yidhi Boobe:
“Dil fool xun oo dhagareed ayaa ka dhacay Magaalada Hargeysa, oo lagu bartimaameedsaday nin Mujaahid Axmed Jabaan la yidhaah, ayaa isaga oo xidhan xilli ku beegan makhribkii, intay ciidamo ku soo baxeen inay ku durduriyeen qoyskiisi iyaga oo madax ka toogtay mid ka mid ah Caruurtiisi.
Axmed Jabaan waxa uu ka mid ahaa hal-doorkii SNM nin mudakara ayuu ahaa, waxa uu ahaa dadkii gudaha ka shaqayn jiray, markii hore Wakaaladii Bardiroolka ayuu u shaqayn iiray, Sahankii gudahana ee Ciidankii SNM ayuu ahaa, gaar ahaan qeybtii 31-aad ama aaga 31-aad, markii dambe shaqadii uu ka tagay, dabadeed gaadhi yar buu wadan jiray, uuna jaadlayn jiray, isaga oo wali shaqadii SNM u haya sirdoonka markii dambe ee la ogaaday ee warkiisu baxay, ayuu Madax ka noqday qaybtii Sahanka, ee jiidii galbeed. 1988-kii iyaga oo ay wada socdaan Maxamed Weere oo Ciidamadii SNM ka mid ahaa iyo Maxamed Ismaaciil (Fitan), ayey Axmed Jabaan xabadi ku dhaceen.
Axmed hadaad aragtaan imika ama sida aan anigu ku arki jiray uu fool jaban yahay, dabadeed xabadii waxa ay kaga dhacday ilkaha, gudahana umay galin, laakiin ilkihii ayuu markii dambe iska soo guray, uuna soo daadiyey, mushiladaas Axmed ku dhacday, oo qaar badan oo aanu ka mid nahay ku dhacday, oo u soo dagaalamay ama qayb libaax leh ka qaatay dagaalkii dib u xoraynta qaran ee SNM horseed ka ahayd, oo qaar badani ku cel celiyaan oo ay yidhaahdan Axmed baa hogaaminaayey, Axmed baa dibada ugu baxay, Axmed baan u soo dubjiray, is weydiintu waxa ay tahay Axmed waxa uu u dagaalamaayey iyo waxa uu ka dagaalmaayey, cidii la dagaalamaysay iyo cidii uu la dagaalamayey in wixii loo soo halgmay ee uu Axmed hogaamiyaha ka ahaa ay ka mid tahay in dhashii Mujaahidiinta sidaas lagu cuno iyana la xidho waa ayaan daro taala, laakiin kol haddi aynu noolnahay oo aanu joogno, waa waajib ina saaran in khaladadkaas dhacay aynu saxno, oo guusha aynu xabada ku keenay nay saxno haddii ay khaldantay inaynu ku soo celino oo majaraheedii ku keeno, inaga oo codka sanduuqa ku ridayna, inaga oo hadlayana, inaga oo wax qorayna”.
Xarun taan ka siiyee (Dawlada Siilaayo)
Iyaduna I xoortaay!!!
Xumey dirirkii baaqdaay
Xansheerkaba iyadoon furin
Xariirteeda kala fidin
Xalka nabada daydayin
Ayay tuute xidhatee!!!!!!!!!!!!
Abwaan Haybe Faarax Nuur
Qalinkii iyo tifatirkii :